Igbo, Tracts, UZI NKE 07 -- Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Jehova Mgbe niile! | Waters of Life
Home -- Igbo -- Tracts -- Tract 07 (The LORD comforts you!)
UZI NKE 7 - Jehova na-akasi gị obi!
Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịmata oke nhụjuanya na osimiri nke anya mmiri na ụwa anyị, anyị ga-awụ akpata oyi n'ahụ ma ọ bụ na-ewepụ ụda obi nkoropụ na egwu. Otú ọ dị, Torah na Oziọma ahụ na-enye anyị ezigbo nkasi obi ma na-enyere anyị aka n'ime ọchịchịrị. Onye Ebere ahụ ji ike mmụọ nsọ gwa Aịzaya onye amụma okwu: "Dị ka onye nne ya na-akasi obi, otú ahụ ka M ga-akasi gị obi." (Aịsaịa 66:13) Chineke Nke Pụrụ Ime Ihe Nile mere ịhụnanya nne na ịdị nwayọọ ya bụ ihe nnọchianya nke ebere ya. Onye ọ bụla chọrọ ịghọta nkasi obi nke Chineke, nwere ike hụ otú nne si elekọta ụmụ ya, mgbe ahụ ọ ga-enwe ike ịghọta ụfọdụ nkasi obi ebighị ebi nke Jehova.
Nne na-eburu ụmụ ya n'afọ, na-amụ ha na mgbu, ya mere ụmụ ya na-aghọ akụkụ nke onwe ya. Ọ na-eche na ọ dị mkpa maka ha, na-ele ha anya, na-elekọta ha ehihie na abalị, na-enye ha arahụ mgbe agụụ na-agụ ha, na-asa ha ọtụtụ ugboro n'ụbọchị, na-anakwere ha, na-egwu ha ma na-agwa ha okwu, ọ bụ ezie na ha aghọtaghị okwu. Ọ dịghị ahapụ ụmụ ya nanị, ma nchegbu banyere ha, hụrụ ha n'anya ma na-ekpe ekpere maka ha, n'ihi na Chineke bụ Chineke na-enye ya aka. Nne juputara n'amara na ima n'ebe umu ya no.
Ka ụmụ ya tolitere, ọ na-azụtara ha uwe na akpụkpọ ụkwụ, nhicha, ọkụ na nchacha maka ha, ma họrọ ụlọ akwụkwọ kachasị mma maka ha. Mgbe ha laghachiri na ụlọ akwụkwọ ha, ọ na-akụziri ha ma na-enyere ha aka na ụlọ ọrụ ha. Ọ bụrụ na ụmụ ya na-eme mmehie, ọ na-abara ha mba ma ọ bụ na-ata ha ahụhụ, na-enwe olileanya na ha ga-etolite na iguzosi ike n'ezi ihe. Ọ na-adọ ha aka ná ntị banyere ihe ize ndụ nke ịṅụ ọgwụ ike, nke inwe mmekọahụ na nke mkpakọrịta na mmụọ ọjọọ na ịgba afa. Ọ na-agbalị ịchọta ezi ndị enyi ha. Ya, onwe ya, bụ ihe nlereanya kacha mma maka ụmụ ya.
Ụmụaka maara na ha nwere ike ịbịa n'ụlọ n'agbanyeghị mmejọ ha. Ha na-ekwupụta nsogbu ha nye nne ha ma na-etinye ha na nzuzo ma zobe ya n'obi ya. Ọ na-akụziri ụmụ ya ezi okwukwe ma na-agwa ha akụkọ banyere ịdị ukwuu nke Chineke. Nne na-egosi mgbe niile ma ọ bụrụ na ike agwụghị ya.
Nkasi obi dị otú ahụ nke Chineke
Ezi ịhụnanya nke nne, ọmịiko ebere ya, nkwadebe ya ịchụ àjà na ndidi ya na-anọchi anya anyị ịhụnanya na nkasi obi nke Chineke. Chineke juputara n'zi n'anya nye ndi niile chighariri ya. Ọ na-emesi anyị obi ike, sị: "Mụ onwe m, Ya onwe m bụ Onye na-akasi gị obi." (Aịsaịa 51:12) Onye Okike na Onye nchịkwa nke eluigwe na ala gosipụtara Onye amụma Ya na ndị Ya, ọbụna n'ime ndị a dọọrọ ha n'agha, na Ọ dị njikere ịkasi obi na nyere ha aka, ma ha chèghar ikwute Ya wee nyefee ya nye ya. Ya, Onye Pụrụ Ime Ihe Nile, dị njikere inye aka na nkasi obi. Ya mere, ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla n'ime ndụ gị, echela ya maka onwe gị, kama nyefee ya n'aka Onyenwe gị ma ị ga-ahụ na O nwere ike ime ihe dị ukwuu ka ịtụkwasịrị Ya obi.
Onye Okike kere anyị ma nye anyị ndụ, ike, uche, uche, amamihe, ahụ na mkpụrụ obi. Anyị abụghị nkume nwụrụ anwụ, ma ọ bụ osisi ndị ogbi, kama ndị nwere onwe ha nwere obi, uche na akọ na uche. Onye maara ihe maara nkà na adịghị ike anyị. Ọ maara ụzọ ziri ezi maka anyị ma chọọ ka anyị jee ije n'ezi ọrụ ndị O kwadebeere anyị (Ndị Efesọs 2:10). Ọ nwere atụmatụ dị iche maka gị. Ọ na-ele gị anya karịa ndị mụrụ gị. Ọ na-achọ ka ị kacha mma.
Ọ dịghị ahapụ gị nanị n'ụjọ, mmejọ na mgbagwoju anya, kama na-elekọta gị ma na-akụziri gị ka ị na-ekpe ekpere, "Nye anyị taa nri anyị kwa ụbọchị" (Matiu 6:11). Echefula na o meghere ụzọ agụmakwụkwọ n'ihu gị. Ọ maara na onye ọlụlụ kwesịrị ekwesị maka gị. Ọ na-eche gị nche ma na-egbochi gị ịghọ aghụghọ na atụmatụ Setan. Nwee amamihe ma nye onwe gi n'aka nna nke Chineke ka O wee duzie gị n'ụzọ ziri ezi.
Nrụrụ aka nke ụwa chọrọ ikpe Chineke. Otú ọ dị, Onye Nsọ ahụ ahapụghị mbibi anyị, ma zitere Ọkpara Mary iji mee ka anyị na Ya dịghachi ná mma. Ọ na-akpọ mmadụ nile ka ha chegharịa ma bịakwute Ya, ịnakwere mgbaghara Kraịst maka mmehie nke ụwa.
"N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a na O nyere Kraist ya, ka onye obula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyi kama ka o nwe ndu ebighebi." (Jon 3:15-16)
Dị ka nne na-eme ka ụmụ ya dị ọcha ọtụtụ ugboro n'ụbọchị, otú ahụ ka Chineke dị nsọ chọrọ ime ka ọ dị ọcha, doo nsọ ma mee ka ị dị ọhụrụ. Onye Na-eme Ebere na Obi ọmịiko dị njikere inyere gị aka, ọbụna n'oge nsogbu gị kachasị njọ. Ọ dị njikere ịgbaghara gị mmehie gị, ọbụna ndị zoro ezo, ọ bụrụ na i kwupụta ha n'ihu Ya. Ọ hụrụ gị n'anya, chọrọ ịgwa gị okwu, na ichere maka ịbịakwute Ya. Olee mgbe ị ga-ekele Ya maka ịhụnanya Ya, nyefee ya ihe omimi gị ma mụta ịje ije dị ka ezi uche Ya si dị? Ọ na-anabata gị na ogwe aka gbatịrị agbatị.
Atụmatụ nke Onye Kasị Elu na-agbasa ọbụna n'ihu. Ọ bu n'obi ịmụta gị ka i wee ghọọ nwa iwu kwadoro nke Ya. Ọ chọrọ inye gị Mmụọ Nsọ Ya ka i wee ghọọ nwa nwoke ma ọ bụ nwa ime mmụọ nke Ya. Ịhụnanya nke Chineke karịrị uche anyị. Ọ chọrọ itinye ndụ ebighị ebi n'ime ahụ gị. Bịakwute Ya, chọ Ya ma ị ga-ahụ Ya dịka nkwa ya: "Unu ga-achọ M ma chọta m, mgbe unu ji obi unu nile chọọ m" (Jeremaịa 29:13)
Nkasi obi nke Kraist
"Ngọzi na-adịrị ndị na-eru uju, n'ihi na a ga-akasi ha obi." (Matiu 5:4) Kraịst bịara n'ụwa nke anyị na-ata ahụhụ site na ịhụnanya Ya nke Chineke, jupụtara ọmịiko. O nwere ọmịiko n'ebe ndị niile ike gwụrụ nọ ma chụsasị, dị ka atụrụ na-enweghị onye na-azụ atụrụ (Matiu 9:36). O kpiri ndi náeso zo ya ka ha soro ya n'enyeghi ha orù. Ọ bụụrụ ha ihe nlereanya ma jiri nwayọọ duzie ha. Mgbe John na nwanne ya nwoke chọrọ inye ọkụ ka ha si n'eluigwe daa n'elu ndị jụrụ ịnara ha, Ọ baara ha mba, sị, "Ị maghị ụdị mmụọ ịbu" (Luk 9:55).
Mgbe Pita, onye na - ekwu okwu banyere ndị na - eso ụzọ, gọnahụ Nna-ukwu Ya, ọ bụ ezie na Jizọs dọọrịrị aka ná ntị, Peter kwara ákwá nke ukwuu. Ot'odi, nwa nke Meri, onye emere ka o si na ndi nwuru anwu bilie, choro ya, gbagha ya ma kasie ya obi site n'iko ya ka o jeere Onyenwe ya ozi.
Mgbe Judas, onye narara ya nye, we were aka ya nye Nna ya ukwu nye ndi iro Ya, Okwugh ya ma obu baara ya mba, ma jua ya, "Enyi, gini mere i biaworo? Ina-eji nsusu ọnụ rara Nwa nke mmadụ nye?" (Luk 22:48; Matiu 26:50).
Jizọs bụ ịhụnanya Chineke. O nwere obi ebere ka Nna Ya nke bi n'eluigwe na-eme ebere (Luk 6:36). Ọrụ ebube nke ọrụ ebube ya bụ ihe àmà nke ọmịiko Ya n'ahụ ndị ogbenye na ndị ọrịa. Mgbe Ọ hụrụ nwanyị ahụ di ya nwụrụ na-akwa ákwá ka ọ na-aga iji lie nwa ya nwoke nanị ya, Kraịst kwụsịrị olili olili ya, mee ka nwa ya dị ndụ ma nyeghachi ya nne ya.
Mgbe mmadu iri ndi ekpenta, ndi adighi ekwe ka ha biarue ndi ahu ike, nuru na Jisos nagabiga, ha tiri nkpu site n'ebe di anya ma rio Ya ka o gwusi ha. Ọ chụpụghị ha, ma gwọọ ha ekpenta site n'ikike nke okwu Ya. Mgbe Ọ zutere ndị mmụọ ọjọọ ji, ndị mmụọ na-adịghị ọcha na-eti mkpu n'obi. Ọ naghị agbapụ ha, ma wepụrụ ndị nwere mmụọ ha na-adịghị ọcha site na okwu Ya pụrụ ime ihe nile.
Jizọs mere ka ifufe ahụ kwụsị iji zọpụta ndị na-eso ụzọ ya ka ha ghara ịṅụ mmiri. O mejuputara mmadu ise ndi guru ya ihe na-agu nri nke na - eji ogbe ogbe ise na azu abuo O gbaghaara nmehie nke nwoke ahu kpọnwuru akpọnwu nke ewedara ya n'iru ya site n'elu ulo, we gọzie umuaka ma we gbaa nwanne Lazarọs ume, "oburu na unu kwere, unu genata ebube nke Chineke" (Jon 11:40).
Jizọs hụrụ mmadụ niile n'anya, ọbụna ndị iro Ya. Ọ maara mmehie nke ndị mmadụ nakwa na ha enweghị ike ịzọpụta onwe ha, Ya mere, O were mmehie nke ụwa dị n'obi Ya ma gbaghara ha, dịka e kpugheere ya n'Alaịa onye amụma na mbụ: "N'ezie O buwo mwute anyị wee buru anyị mwute; ma anyị ji ya tụọ ya ụtarị, nke Chineke tib uru, ma mesie ya ike. Ma o merụrụ ya n'ihi mmebi iwu anyị, e merụrụ ya n'ihi ajọ omume anyị; ahụhụ maka udo anyị dị n'elu Ya, site na ụtarị Ya a gwọọ anyị. Ihe niile anyi huru dika aturu si akpafu; anyị echegharịwo, onye ọ bụla, n'ụzọ ya; Jehova emewo ka ajọ omume nke anyị nile dakwasị Ya." (Aịsaịa 53:4-6)
Nwa nke Meri mezuru mgbapụta nke ụwa ma mee ka ezi omume nke Chineke nabatara. O nyere anyị aka, site na ọnwụ ọnwụ Ya, iji nweta mmụọ nkasi obi sitere na Chineke.
Nbia nke Mmo Nso nime ndi soro Kraist
Onye ọ bụla nke meghere obi ya n'ịhụ Chineke n'anya na ọmịiko ngwọta nke Kraist ma nabata mmehie ya, na-anata Mmụọ nke nkasi obi, onye bụkwa Mmụọ nke eziokwu. Jizos kwere ndi náeso zo yokwu n'oge ntà tupuon wa: "Mgaekpere Nnam, ogaenye kwa unu Onye ozoozo ka owedina gide rue mgbe ebighiebi Mmo nke eziokwu, onye uwa ap ghi inweta, n'ihi na oma amaghi Ya; ma unu maara Ya, n'ihi na Ọ na - anọnyere unu, ọ ga - abụkwa n'ime unu" (Jọn 14:16-26; 15:26-27; 16:7-14) Mmụọ nkasi obi bụ nkwa dị ukwuu nke Nna. E nyere ya, n'aha nke Kraist, nye onye ọ bula nke nāriọ Ya (Luk 11:13).
Mmụọ Nsọ a na-ekpughere anyị eziokwu banyere Chineke, Nna anyị ime mmụọ, banyere onwe anyị na banyere ọdịnihu. Ọ na-emeghe anya nke obi anyị nye eziokwu nke Chineke, na-eme ka ezi okwukwe dịrị n'ime anyị, na-enyekwa anyị mmesi obi ike ebighi ebi. Ọ bụ Onye Nkwado anyị n'ụbọchị ikpe na Onye Nkasi anyị mgbe akọnuche anyị mara anyị ikpe.
Mmụọ nke eziokwu na-eduzi anyị na nkeji ọ bụla nke ndụ anyị, dịka Pọl onyeozi na-agba akaebe: "Ndị niile mmụọ nke Chineke na-edu, ndị a bụ ụmụ Chineke" (Ndị Rom 8:14)
Mmụọ nkasi obi a na-enyere anyị aka n'oge nzuzu, nkụda mmụọ na ọdịda. Ọ na-enye anyị mmesi obi ike, udo na nchebe pụọ n'ichebe ihe ize ndụ, ma mee ka anyị ghara ịnwụ ọnwụ. Mmụọ a na-akpali anyị ịdị ndụ ma dị umeala ma merie mmehie anyị ma ọ bụrụ na anyị ajụ ma kpọọ ha asị. Mmụọ nke Chineke dị nsọ. Ọ chọrọ ido anyị nsọ, duzie anyị ka anyị kwupụta ajọ omume anyị n'ihu Chineke, ma mee ka anyị hụ eziokwu, ịdị ọcha na imekọrita.
Onye nkasi obi Chineke adighi enye Onwe Ya otuto kama o na-enye Okpara nke Meri, Onye Mgbapụta anyi otuto, ma nyere anyi aka ighota ihe omuma nke ihu-n'anya Ya. Mm] nke Chineke b nd ebighiebi nime Onwe Ya na ike, nke gaadighi akwusi. Ọ na-akasi anyị obi, na-emeri ọnwụ anyị site na ndụ Ya ma na-anọgide na anyị ruo mgbe ebighị ebi.
Mmụọ a na-akasi obi na-ebi n'ime ndị na-eso Kraịst n'ihi na ha kwere na mkpuchi mmehie Ya. Mkpụrụ a na-agbanwe àgwà ha ka ịhụnanya, ịdị mma na obiọma Chineke wee pụta n'ime ha. Onye nkasi obi a na-eduzi anyị ịgbasa okwu Chineke na ijere ndị nọ ná mkpa ozi. O juputara na otuto na ekele. Onye na-eme ebere na-achọ ịgbanwe anyị n'ime ndị nkasi obi, dị ka Pọl onyeozi kpere ekpere: "Ka Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, Nna nke obi ebere na Chineke nke nkasi obi nile bụrụ onye a gọziri agọzi, bụ onye na-akasi anyị obi ná mkpagbu anyị niile, ka anyị wee nwee ike ịkasi ndị nọ n'ọnọdụ ọ bụla obi, na nkasi obi nke Chineke n'onwe anyị kasiri anyị obi." (2 Ndị Kọrịnt 1:3-4) Mmụọ nke Chineke adịghị agbanwe ọnọdụ anyị gburugburu ngwa ngwa, kama nke mbụ, anyị gbanwere onwe anyị site na mgbapụta Kraịst. Obi anyi na-echere Onye nzoputa anyi n'ihi na O huru anyi n'anya site na mmalite. Ọ na-enye anyị ike nke amara Ya site na amaokwu nke Oziọma Ya. Onye obula nke guru okwu nke Kraist, neme ka ha ma me dika o si di, gabu onye di nma na onye obi uto.
Ị nwetara nkasi obi nke Chineke? Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere eziokwu nke mmụọ nkasi obi, anyị dị njikere ịnye gị ozioma nke Kraịst, tinyere nkwenye na ekpere, ka i wee nwee udo na Chineke n'etiti ọchịchịrị.
Kasie ndị nọ ná mkpa n'aka gị: Ọ bụrụ na okwu akwụkwọ akụkọ a nyere gị olileanya ọhụrụ, nyefee ya n'aka ndị na-achọ udo na Chineke, ka ha onwe ha kwa wee nweta nkasi obi na obi nkoropụ ha. Gwa anyị akwụkwọ ole na ole i kpebisiri ike ịhapụ ka anyị wee ziga gị nọmba ole na ole maka ọrụ gị.
Page last modified on October 01, 2018, at 02:40 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)